Custom About Us Adeeg & Soo-saare | Processing Birta Hengli
Hangzhou Hengli Birta Processing Co., Ltd.
Hengli waa shirkad si buuxda isku dhafan u ah wax soosaarka iyo adeegyada injineernimada oo bixisa goynta plasma CNC, jarista ololka CNC, goynta laser, foorarsiga, makiinadda iyo alxanka (EN1090, ISO 3834-2 oo la caddeeyay, in ka badan 160 shaqaale ah oo ay ku jiraan kuwa weligood shahaadada kahelay Yurub / Mareykanka -farshaxanka alxanka 8 robot), rinjiyeynta qaybaha birta iyo isku dhafka, shirar qiimo sare lagu daray oo ka yimid beeraha, dhismaha, macdanta, tamarta, gaari xamuul culus iyo qeybaha warshadaha.
Laga soo bilaabo 2002, xubnaheena 660-koox ee injineerada, alxanleyaasha, bakhaarka, hawl wadeenada qalabka, macaamiisha khubarada adeega, iyo wakiilada iibka, dhamaantood way joogaan waxayna diyaar u yihiin inay dhageystaan ​​baahiyahaaga isla markaana ay gaarsiiyaan balan qaadkeena ah adeegga been abuurka ugu fiican ee la heli karo.
Shaqaalaheennu waxay ka maareyn doonaan mashruucaaga xiriirkaaga bilowga ah illaa gudbinta alaabta dhammaatay.
Hengli qalabkiisa oo dhameystiran, 55,000 sq m2. xarunta waxay na siisaa waxsoosaar buuxa iyo karti been abuur ah oo lagama maarmaan u ah alaab khaas ah oo loogu talagalay dalabkaaga.
Hengli waxay bixisaa 100% kormeer cabbir ah waxayna bixin kartaa baaritaan dheeri ah oo hubin tayo leh haddii loo baahdo.
Adeegyada oo dhammeystiran iyo Adeegyada Golaha - Adeegyadeena waxaa ka mid ah goynta plasma-ka CNC, goynta ololka, goynta leysarka, leexinta, foorarsiga, xiirashada, makiinadaha rogista iyo alxanka. Waxaan soo saareynaa sida ugufiican ee dulqaad loo been abuurtay oo macquul ah si aan ula kulano shuruudahaaga oo aan u hubinno sharafnimada barxadda. Waldeyaasheena ayaa ah kuwa AWS / TUV la aqoonsan yahay, welina alxankayaga iyo geeddi-socodka alxamiddu waxay la kulmaan heerarka EN1090 iyo ISO 3834. Waxaan awood u leenahay tirooyinka laga soo qaatay noocyada noocyada kala duwan ee wax soo saarka.
Adeegyada Dhammaysta - Waxaan bixinnaa adeegyo dhammeystir ah haddii loo baahdo, iyo iyada oo loo marayo wada-hawlgalayaal lagu kalsoon yahay. Kuwaas waxaa ka mid ah mashiinka, rinjiyeynta, dahaadhida, shiidida iyo nadiifinta. Adeegyo dheeraad ah ayaa la heli karaa.
Waxaan bixinaa adeegyo tijaabooyin NDE ah Khibraddeenna ku saabsan sameynta alaabooyinka gaarka ah ee loogu talagalay codsiyada qaaska ah waxay xaqiijineysaa in mashruucaaga lagu dhammaystiri doono qeexitaankaaga.
Nala soo hadal maanta ama dhagsii halkan si aad u codsato sicir dalabkaaga ah.